Kungani Kufanele Uthuthukele ku-Google Universal Analytics | Martech Zone
Ake sisuse lo mbuzo endleleni manje. Uma kufanele uthuthukele ku- I-Universal Analytics entsha yakwaGoogle? Yebo. Eqinisweni, kungenzeka ukuthi usuthuthukiselwe ku-Universal Analytics. Kepha, ngoba iGoogle ivuselele i-akhawunti yakho, akusho ukuthi akudingeki ukuthi wenze enye into noma ukuthi uzuza kakhulu kwi-akhawunti yakho entsha ye-Universal Analytics.
Khona manje, I-Google Universal Analytics ikhona isigaba sesithathu yokukhishwa kwayo. Iphelelwe yi-beta futhi ama-akhawunti amaningi athuthukiswa ngokuzenzakalela. Eqinisweni, awukwazi ngisho nokukhetha uhlobo oludala lwefayela le- analytics lapho usetha i-akhawunti entsha. Lapho i-Universal Analytics iqala ukuphuma ku-beta, ibisalahlekile isici esibalulekile ezinkampanini eziningi. Lokho bekungukubonisa izici zokukhangisa ezikuvumela ukuthi udale uhlu olubheka kabusha. Manje, izici zokubonisa zihlanganiswe ngokuphelele ku-Universal Analytics (UA), okusho ukuthi akukho lutho olubamba i-akhawunti entsha ekuhambeni ne-UA. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi ngenxa yokuthi i-akhawunti yakho ithuthukisiwe ukuthi azisekho izinto okufanele uziqaphele lapho uthuthuka.
Izinto Okumele Uziqaphele
Njengamanje, uma ikhodi esizeni sakho isebenzisa i-ga.js, urchin.js, noma izinhlobo ze-WAP zekhodi, uzodinga ukubuyekeza ikhodi lapho iGoogle ifinyelela isigaba sesine sokuthuthuka kwe-Universal Analytics. Ingakapheli iminyaka emibili yokwethulwa kwesigaba sesine, lezo zinguqulo zekhodi zizokwehliswa. Futhi, akuwona nje umbhalo ozokwehliswa. Uma njengamanje unokuhluka okwenziwe ngokwezifiso noma okuguquguqukayo okuchazwe umsebenzisi okusebenzisa ukulandelela idatha, kuzodingeka ukuthi ukuguqule kube ubukhulu bangokwezifiso ukuze ukwazi ukuzisebenzisa, njengoba nazo zizokwehliswa.
Lokhu kungasho nokuthi ngokuzayo, uma usebenzisa indlela yakudala yokwenza ukulandelwa komcimbi, kuzofanele nokuthi ivuselelwe kunguqulo entsha yekhodi yokulandela umcimbi. Ngakho-ke, uma ikhodi yakho ingavuselelwa okwamanje, kungani ubhekene nayo yonke inkinga manje kunokuba ulinde iminyaka emibili?
Kungani Uqedela Ukuthuthuka?
Isizathu se-Google sokwenza ngcono bekungekhona nje ukuthi bachitha isikhathi sakho. Bakhiphe ezinye izici, uma uzinika isikhathi ukuzisebenzisa, zizokusiza ukukala izinto obungakaze wazi ngaphambili. Ipulatifomu entsha izokuvumela ukuthi:
Qoqa idatha kunoma yini
Dala Ubukhulu Ngokwezifiso Namamethrikhi Angokwezifiso
Sungula ama-ID omsebenzisi
Sebenzisa i-Ecommerce ethuthukisiwe
I-Google manje inezindlela ezintathu zokuqoqa idatha: i-analytics.js yamawebhusayithi, ama-SDK eselula we-iOS ne-Android, futhi - kimi okuthakazelisa kakhulu - inqubo yokulinganisa yamadivayisi edijithali. Ngakho-ke manje usungalandelela amawebhusayithi akho, izinhlelo zakho zokusebenza, nomshini wakho wekhofi uma ufuna, ngaphakathi kwe-Google Analytics. Abantu sebevele bafaka umthetho olinganiselayo wokusebenza ukuze bakwazi ukubala ukuhamba ngezinyawo esitolo, ukuqapha amazinga okushisa, nokuningi. Amathuba awapheli ngempela, ikakhulukazi ngenxa yesici esisha esilandelayo.
Ubukhulu Ngokwezifiso Namamethrikhi Angokwezifiso
Ubukhulu ngokwezifiso namamethrikhi wangokwezifiso empeleni yinguqulo enesobho yokuhluka okudala kwenkambiso. Ukukunikeza umbono wokuthi lezi zilinganiso ezintsha zingaba namandla kangakanani, ake sithi lapho umuntu ebhalisela insizakalo yakho eyenzeka njengesevisi efana ne-Yelp, ubabuza imibuzo eminingana. Ungababuza umbuzo onobukhulu ngokwezifiso obubizayo uhlobo lokudlela oluthandayo. Izimpendulo zale mibuzo kungaba ukudla kwaseMexico, izitolo zamasemishi, njll. Ungase ubuze umbuzo wokulandelela wokuthi badla kangaki ngenyanga ngaphandle. Lokhu kukunikeza imethrikhi entsha yangokwezifiso ye- inani odla ngalo ngenyanga noma i-AEOM. Ngakho-ke, manje ungabheka idatha yakho ukuhlukanisa abasebenzisi abahlukile ukubona ukuthi bayisebenzisa kanjani isayithi lakho. Isibonelo, ungahlukanisa abantu abathanda izitolo zamasemishi ezidla izikhathi ezi-5 ngeviki. Lokhu kungakusiza wazi ukuthi ungakubhekisa kanjani kangcono okuqukethwe kusayithi lakho. Amathuba awapheli, ikakhulukazi uma ungeza lokhu kuzinhlelo zakho zokusebenza zeselula. Uma ungeze lokhu kulandelwa kumdlalo wakho weselula, ungathola zonke izindlela izindlela amakhasimende adlala ngazo lo mdlalo.
Njengoba amakhasimende amaningi asebenzisa izinhlelo zokusebenza zeselula namakhasimende ashintsha phakathi kwamafoni, amathebulethi, namanye amadivayisi, awusoze wazi ukuthi bangaki abasebenzisi abahlukile nabasebenzayo obukade unabo ngenyanga ngendabuko analytics. Manje ngokwakha i-ID yangokwezifiso oyinike abasebenzisi bakho, ungalandelela umsebenzisi osebenzisa ifoni yakhe, ithebhulethi, ne-laptop ukufinyelela isiza sakho njengomsebenzisi oyedwa. Lokhu kukunikeza ukuqonda okuningi kunakuqala kokuthi amakhasimende akho ayisebenzisa kanjani insiza yakho. Kusho ukuthi akusekho abasebenzisi bokubala abaphindwe kabili noma kathathu. Idatha yakho isivele ihlanzeke ngendlela.
Ngemibiko ethuthukisiwe ye-ecommerce, musa nje ukuthola ukuthi yini abasebenzisi abayithengile kusayithi lakho nokuthi kungenise malini. Thola ukuthi bakugcine kanjani ukuthenga. Uzothola imibiko efana nokuthi amakhasimende afaka ini ezinqoleni zawo nokuthi yini ayisusayo ezinqoleni zawo. Uzokwazi nokuthi baqala nini ukuphuma nokuthi bathola nini ukubuyiselwa kwemali. Uma i-ecommerce ibalulekile kusayithi lakho, bheka ngokujulile kulokhu lapha njengoba kunokuningi kakhulu okufanele kubhekwe.
Nayi ividiyo yokuthi kanjani IntengoGrabber isebenzisa i-Google Universal Analytics:
Ulindeni? Sebenzisa idatha entsha onokufinyelela kuyo ukuze unikeze amakhasimende akho umuzwa ongcono nakakhulu kuwo wonke amadivayisi.
Tags: I-google analyticsizibalo ze-google universalintengoizibalo zomhlaba wonkebuyekeza i-google analyticsthuthukisa i-google analyticsthuthukela kuma-analytics jikeleleyini i-universal analyticskungani uthuthukela ku-universal analytics